Ngaba ndinokukufumanisa ngokukhawuleza izinto eziphandwayo kwi-Amazon?
Impendulo emfutshane nguwe, unako. Kwaye akunzima ukufumana izinto ezifunyenwe kakhulu kwi-Amazon ukuze uzifake kwiindawo zakho zokubhala kwaye ekugqibeleni udibana naloo mfuneko ye-niche ngokugcwele. UAn udinga ukuba ube ne-toolkit efanelekileyo okanye iplani enye yokumisa zonke iimfuno zakho malunga nophando lokhuphiswano kwaye ulandelelanise iimethrikhi zokusebenza ezingundoqo kwi-Amazon. Kodwa kuthekani ukuba ndiyathetha nokuba uphando oluphezulu lwezinto zophando kunye nezixhobo zokulandelela ziyingxenye encinane yepuzzli enkulu equlethe onke amathuba amathengiso athengisa afunyanwe ngenxalenye yengonyama yabathengisi abathengisa ngaphaya kwalo. Ngoko, ngezantsi ndiya kukubonisa iindlela ezinokukhetha ukuba ufumane lula izinto ezithengiweyo kwi-Amazon kwaye ufumane iingcamango ezicacileyo, iziphakamiso ze-niche, kunye neendlela eziqhelekileyo kunye nezentengiso ezingabangela impembelelo yakho yokuthengisa kuloo ndawo yemarike .
I-Jungle Scout izinto kwi-Amazon. Ziziphi iimveliso okwangoku ngaphezulu kwemfuno yabathengi? Ziziphi iimveliso ezifunyenwe kakhulu kwi-Amazon? Ziziphi iimpawu ezifumanayo ekuthandeni? Yintoni ongayenza okungcono kunokuba ukhuphiswano lwakho olusondeleyo? Ngaba kukho na iimpazamo kunye nezigqibo ezingalunganga sele zithathwe ngabadlali bakho beemarike ukuze ungalokothi unxweme? Ungayifumana njani ngoku iindawo ezifihliweyo zemithombo yempahla kunye nezinto ezinokutshisa ezithengiswayo? I-Jungle scout niche hunter iyona sixhobo sokukunika zonke iimpendulo ezifunekayo ukuze uhlale ukhuphiswano lobundlobongela kunye nokukhokela kwi-Amazon.
Keepa - iyona sixhobo esiphezulu sexabiso lokutsala ukuba ube nomfanekiso opheleleyo wexabiso elikhoyo ngoku elibonakalayo kwizinto ezininzi ezifunyenwe kwi-Amazon (ngokukhulu Imbali yolondolozo ekhoyo ukufumana iimpawu eziphambili eziqhuba umshishini we-ecommerce kunye ne-drop shipping shipping). Esi sikhokelo sekhompyutheni esilungileyo sixhaswa kumazwe angama-11 ahlukeneyo eza ngeenguqulelo ezininzi zeelwimi ukuze kukuncedise ngokuthelekiswa kwexabiso, ukuphawula kwexabiso lentengo, izaziso zokufumaneka, izaziso zezinto ezikhoyo, kunye neentshukumo zakamuva kwi-Amazon ezifanelekile .
Ukuya kwi-Spy kwiMagcisa
Uluhlu Yisebenzise ukuze ufumene izinto ezithengiweyo kwi-Amazon, ngokuhambelana neenkcukacha eziphambili ezithandwa ngabancintisana bakho-kwaye uyenziwe. Esi sixhobo sinceda ekuphuculeni iiprogram ze-Pay-Per-Click kunye namagama angundoqo akwenzayo, kunye nokubonisa ukuba unokuthi uthembisa i-niches nge-margin ephezulu enenzuzo ngokukhawuleza ngokukhuphisana. Ukongezelela, Ubume bubonakala busebenza ngokukhawuleza xa kufikelele ekulawuleni umngcipheko kunye nazo zonke izibalo ezinzima ukuqikelela inani lakho lokuthengisa kunye nempahla, okanye umzekelo, unokulindeleke ngakumbi kunenzuzo emva kwe-FBA.